Elizabeth Arden ALWAYS RED Femme Eau de Toilette | CosmeticMyanmar
Home » Fragrance » Elizabeth Arden ALWAYS RED Femme Eau de Toilette
၆၈၀၀၀ ကျပ်/1.7 FL. OZ. ၉၄၀၀၀ ကျပ်/3.3 FL. OZ.
အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ တနေ့တာကိုဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအသင့်တော်ဆုံးသောရေမွှေးဖြစ်တဲ့ ALWAYS RED Femme Eau de Toilette နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ALWAYS RED ကတော့ Elizabeth Arden ကထုတ်ထားတဲ့ ဒီရေမွှေးလေးဖြစ်ပြီး Blackcurrand Bud, Muguet, သစ်တော်, လီမွန်, မက်မွန်ပွင့်နဲ့ စံပယ်ပန်းတွေစတဲ့ ပန်းပါင်းများစွာပါဝင်ဖော်စပ်ထားပါတယ်။
Flora Gorgeous Gardenia ၁၃၆၀၀၀ ကျပ် / 100ml
Gucci Guilty ၉၂၀၀၀ ကျပ် / 50ml
Gucci Made to Measure ၁၂၄၀၀၀ ကျပ် / 90ml
Gucci Bloom ၁၂၅၀၀၀ ကျပ် / 50ml
Gucci Guilty Black ၁၁၅၀၀၀ ကျပ် / 90ml
Gucci Bamboo Limited Edition ၁၂၈၀၀၀ ကျပ် / 50ml
HhH	October 11, 2017 at 8:53 am
တစ်နေကုန် မွှေးပျံ့ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ်